2021 Amaala Antigua na Barbuda
O kwere omume inweta ụmụ amaala nke Antigua na Barbuda n'okpuru mmemme ụmụ amaala site na itinye ego na ụlọ, azụmaahịa ma ọ bụ ego mmepe mba
amaala mba abụọ;
ọ dịghị ihe a chọrọ maka obibi kpọmkwem;
enweghị ụtụ isi n'ihe metụtara ego ụwa;
obibi - naanị ụbọchị ise, maka afọ ise;
ọ dịghị ihe achọrọ maka agụmakwụkwọ, ahụmịhe njikwa;
inweta ohere ileta ihe karịrị mba 150, gụnyere Hong Kong, Great Britain, tinyere ndị gụnyere na mpaghara Schengen;
nnata n'ime oge na-erughị ọnwa atọ, gụnyere obere ụmụaka, yana ụmụaka n'okpuru afọ 25;
ndebanye aha nwa amaala maka ndị nne na nna n'okpuru afọ 65, na-ebi na onye na-arịọ arịrịọ;
enwere ike inweta akwụkwọ ndị gọọmentị, n'ime oge anaghị agafe ụbọchị 60 site na ụbọchị itinye ego;
favokèala dị mma maka obibi ebighi ebi.
Otu esi enweta ụmụ amaala nke Antigua na Barbuda:
US $ 100 - onye na-arịọ arịrịọ gbakwunyere mmadụ 000 na-elekọta,
Na ego nke US $ 125 - onye na-arịọ arịrịọ tinyere mmadụ 000 na-elekọta.
2. Site n'itinye ego na ala emebere ụlọ:
N'ime usoro ihe omume a na-atụle, ọnụ ahịa ụlọ a nwetara ga-abụrịrị opekata mpe $ 400 puku US na atụmatụ akwadoro. Ngwongwo agha aghaghi inwe ya ma o pekata mpe ise. Ndebanye aha nke ihe onwunwe, ụgwọ ndebanye aha na ịkwụ ụgwọ ụtụ isi na-akwụ ụgwọ karịa ụgwọ nke inweta ihe ahụ n'onwe ya.
3. Nhazi nke oru itumgbere ahia
Onye anamachọ a aghaghi itinye ego nke US dolla 1 nde 500 iji bido azụmaahịa ma nweta amaala nke Antigua na Barbuda. Ọzọkwa, itinye ego nwere ike ịnakọta. N’okwu a, opekata mpe maka nwa akwukwo ọ bụla bụ US $ 400, ngụkọta opekata mpe bụ US $ 5 nde.
US $ 25 - rue ndị na-achọ 000;
US $ 15 - onye ọ bụla chọrọ.
Mmefu maka nkwenye nke itinye aka na mpụ:
US $ 7 - onye na-arịọ arịrịọ;
US $ 4 - onye na-elekọta n'etiti afọ 500 na 18;
US $ 2 - onye nlekọta nke 000 ruo 12 afọ.
Mụ amaala nke Antigua na Barbuda RUS
Antigua na Barbuda ensmụ amaala ENG